Dharka caadiga ah ee Oaxaca | Wararka Safarka
Dharka caadiga ah ee Oaxaca
Mariela Carril | 26/08/2021 17:00 | La cusbooneysiiyay 27/08/2021 23:21 | dhaqanka, Mexico
ka dharka dhaqanka waxay fasiraan caadooyinka, caadooyinka, wax kasta oo la xiriira dhulka iyo dadkiisa, dhaqankiisa, diintiisa, calooshiisa, muusikadiisa. Waxaan ku sii socon karnaa waqtigii hore, waxaan ku dari karnaa horumar, hal -abuur, in sanadaha ay ku miisaamaan dhabarka ummadaha, laakiin dharka caadiga ah ayaa had iyo jeer halkaas joogi doona si uu na xusuusiyo wixii tagay, asalka, taariikhda. Cidda aan nahay iyo meesha aan ka nimid.
Taasi waa sababta aysan badanaa u jirin hal dhar caadi ah oo mar labaad, marka laga hadlayo maanta, waxaan la kulannaa dhowr nooc oo dharka caadiga ah ee Oaxaca.
2 Dharka caadiga ah ee Oaxaca
Gobolka koonfur -galbeed ee Mexico waa gobolka Oaxaca, oo ah goob ay ku badan yihiin dadka asaliga ah. Run ahaantii waxaa jira 16 qowmiyadood waana wax lala yaabo in inta badan caadooyinkoodii ay badbaadeen.
Buuraha, wabiyada, boholaha, godadka, dhammaan arrimahan ayaa tilmaamaya juqraafiga. Waa dhul leh cimilo kala duwan iyo a kala duwanaanshaha noolaha. Sababtoo ah dadkeeda asaliga ah ee weyn iyo gumaysiga Isbaanishka ayaa ah dhulkii sinaanta diinta.
Oaxaca waxay u dabaaldegtaa dhammaan quduusiinta, laakiin xafladda ugu wanaagsan dhammaantood waa tii 18 -kii Diseembar, xafladdii ixtiraamka ee Virgen de la Soledad. Sida iska cad, waxaa jira bikrado kale oo iyagana aad loo xuso.
Mid ka mid ah dharka caadiga ah ee caanka ah ee Oaxaca waa kan Tehuana, qaabkaas oo uu fannaanku aad u ogaaday Frida khalo. Waa dharka dumarka ee qowmiyadda Zapotec, oo ah dad ku nool istmus ee Tehuanpetec. Halkani waa meeshii dacwaddu ka bilaabantay, taas oo markii dambe ballaarisay isticmaalkeeda waxaana maanta lagu arkaa dabbaaldegyo badan, in kasta oo wakhtiga la dhaafayo iyo wax -ka -beddelka joogtada ah ee lagu sameeyey.
Waxaa jira dhar maalinle ah: wuxuu ka kooban yahay rabona, goonno dhaadheer, oo daabac leh oo ka samaysan dhar kasta. Waxaa jira a waxoogaa ka sii xarrago badan kaas oo lagu daro olán cad oo maryo kale ah. Waa sidee a suud gala galab timaha ayaa noqonaya mid muhiim ah. Haddii haweeneydu guursato, waxay adeegsataa xargaha hagaha ubaxa ee midigta ah iyo haddii ay keligeed tahay laakiin nin raadineyso, dhinaca bidix.
La nooca gala habboon ayaa horeba u leh hilqado, kabo duug ah iyo kuwa caadiga ah huipil in aan ku aragno dhowr dal oo Laatiin Ameerika ah. Timaha waxaa lagu xiraa tidcan qaansooyin iyo lacag madaxiisa ah. Huipilku waa weyn yahay waxaana loo gashan karaa laba siyood: dhinac yar ayaa loo adeegsadaa dabaaldegyada iyo dhinac weynna waxaa loo adeegsadaa socod ama qoob ka ciyaar. Waxaa jira nooc kale oo xitaa ka sii hufan oo loo yaqaan Hantidhowrka wakiilka halkaas oo ay ka muuqato dixiri dixir ah oo lagu sameeyay dahab taasna waxay soo muuqataa waqtigii Porfirio Díaz.
Markii dambe, qaybta koonfureed ee dooxooyinka dhexe ee gobolka, waxa loogu yeero dharka chenteña. Isku -darka dadka asaliga ah iyo gumaysiga, halkan waxaan ku leenahay goonnada suufka gacanta lagu sameeyay oo midabkiisu dhalaalayay, xagga horena waxaa ku yaal shaadh si aad ah loo xardhay oo suuf madow ah.
Magaalada Coyopetec, ee Dooxada Oaxaca, the dharka coyotepec: marada waa plaid oo huipil, oo ah midka ay wadaagaan dhinac walba, ayaa lagu xardhay qoorta waxaana laga sameeyay suuf cad. Shawlku waa madow oo madaxa ayuu u duuban yahay sida cimaamad.
Dhinaceeda, Sierra Mazateca, huipil waxay leedahay xaraash hore oo leh tolmo iskutallaab ah oo midabyo aad u firfircoon leh. Xirxiriddu badanaa waa ubaxyo iyo shimbiro maxalli ah. Waxa kale oo jira ribbooyin buluug ah oo casaan iyo turquoise ah. Qeybta hoose ee huipil waxaa ku yaal jaakad cawlan oo lagu sharraxay daabac casaan ah. Dumarku waxay timahooda ku shanleeyaan laba braids oo markay dheeshaan waxay ku sameeyaan gacmo -gacmeed ay gacmahooda ka buuxaan ubaxyo ubax oo ay tuuraan.
Dhar kale oo qurux badan oo caadi ah ayaa ah dharka malacatera oo ka socda Jamiltepec. Waxaa sidaas loogu yeeraa maxaa yeelay qofkii sameeya wuxuu u adeegsadaa winches si uu suufka ugu wareego. Waxaa lagu dheehay lilac iyo casaan gabdhuhuna xirtaan chongos madaxa oo cirbadaha winch -ku ku jiraan.
In xeebta badhtamaha Tehuanteepec Qowmiyadda Huave way nooshahay. Aad bay u kulul tahay halkan sidaas huipil classic waa iftiin, Goonnadu waa dheer tahay oo waxaa lagu daabacay ubax waxayna leeyihiin xagal cas. Badda ka fog, in mixteca sierra, waxaa jira suudh triqui. Halkan huipilku waa mid dheer oo casaan ah wuxuuna leeyahay xardho badan. Dumarku waxay timahooda ku xidhaan hal sharooto oo lagu qurxiyey shanlo iyo silsilado midabyo badan leh ayaa qoorta ka laalaada.
Illaa iyo hadda waxaan magacawnay qaar ka mid ah qaar badan oo ka mid ah dharka Oaxaca ee jira, laakiin dhammaantood waxay ahaayeen dumar. Ka warran dharka caadiga ah ee nin ka soo jeeda Oaxaca? Waa hagaag, sidoo kale waxaa jira dhowr, laakiin sida iska cad waxay ku saabsan tahay dharka ka fudud. Badanaa waxay ka kooban tahay gaagaaban, shaar, kabo, mararka qaarkood dhogor ama koofiyadaha timirta.
Runtu waxay tahay in kasta oo ay jiraan dacwooyin badan guud ahaan, haddana kan hoose ayaa la ilaaliyaa: the huipil. Gaaban, dheere, dhejis badan, dahaar yar, waxayna leedahay adeegsiyo badan maadaama ay tahay maalin kasta ama dhacdooyin aad u daran sida aroosyada ama aaska. haa, waxay noqonaysaa midabo badan marka la joogo xafladaha halkaas oo lagu ciyaaro
Waxaan u malaynayaa in mid kasta oo ka mid ah labisyadan ay tahay odayga midabka iyo ciyaarista. Waa cajiib oo iyaga oo ku arkaya masraxa, qoob ka ciyaarka iyo dabaaldegyada, waxay u tahay farxad indhaha. Sida iska cad, haddii aad go'aansato inaad safar ku aaddo Mexico, iibsashada huipil had iyo jeer waa xusuus wanaagsan oo ku saabsan soo -jeedimahaaga. Xusuus wanaagsan iyo maryo indhaha oo dhan ka xadi doonta jidka guriga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Mexico » Dharka caadiga ah ee Oaxaca
Dharka caadiga ah ee Chiapas